कान्ति न्यौपाने « Janata Samachar
Tag: कान्ति न्यौपाने
यहाँको त के विश्वकै ठूलो व्यक्तिलाई चिनेपनि म समस्यामा पर्दा सहयोग गरेन भने चिन्नु र नचिन्नुमा के फरक भयो र? पत्रकार भनेर कार्ड झुन्डाएर हिड्नुमा के औचित्य रहन्छ र?
वीर अस्पताल दुर्गन्धको चपेडामा छ । स्वास्थ्यमन्त्रीद्वयले चिटिक्क भएर मुलुकका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरिरहुनु भएको छ । तर अस्पतालको वातावरणले भने उहाँहरुको प्रतिवद्धतालाई गिज्याई रहेको छ ।
अव्यवस्थित तवरले फ्याँकिएका फोहोर र अस्पताल भित्रको दुर्गन्धले स्वस्थ व्यक्ति समेत बिरामी नपर्ला भन्न सकिदैँन ।
नेकपाको कार्यदल बिघटन, एकताकाे जिम्मा सचिवालयलाई
कान्ति न्यौपाने काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एकता कार्यदल बिघटन गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको सचिवालय बैठकले कार्यदल बिघटन गरेको हो । एकीकरणको टुंगो सचिवालयले नै लगाउने
‘प्रधानमन्त्रीमा शासकीय योग्यता देखिएन’
कान्ति न्यौपाने काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारको एक वर्षको समीक्षा गरेको छ । समीक्षामा कांग्रेसले सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको आरोप लगाएको छ । ’सरकारले जनताको विश्वास गुमाएको छ’
साँसदले मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दा माइक काटियो
कान्ति न्यौपाने काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दा माइक काटिएको छ । संसदमा शुरु भएको मन्त्री र सांसदबीचको प्रश्नोत्तरमा सम्बन्धित पक्ष स्पष्ट हुन सकेनन् । बैठकमा सांसदहरुले
प्रतिनिधिसभा बैठक शुरु, ८ विधेयक पेश हुँदै (LIVE)
कान्ति न्यौपाने काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु भएको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सासद गगन थापाले सरकारको कडा आलोचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिाधिसभाको आइतबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका ८
‘सरकार र नेकपालाई चस्मा पुछेर हेर्नुस्’
कान्ति न्यौपाने काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार पद्धति अनुसार नै चलेको बताउनु भएको छ । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) लोकतान्त्रिक पार्टी हो’ उहाँले शनिबार पार्टी मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भन्नुभयो, ‘नेकपाले
११७६ लाई मुद्दा, समितिले भन्यो- २७९ को फिर्ता लिनू, अरु सकिन्न
कान्ति न्यौपाने काठमाडौं । राज्य र संविधानविरुद्ध गतिविधि गरिहेका विभिन्न समूहसँग वार्ताको लागि गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितिले प्रतिवेदन बिहिबार सार्वजनिक गरेको छ । राज्य र संविधानप्रति असन्तुष्ट विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न